Jidkii Ikraan iyo Almaas miyaaad qaaddeen? | KEYDMEDIA ONLINE
Jidkii Ikraan iyo Almaas miyaaad qaaddeen?
Sida ay Keydmedia Online, u sheegeen ilo Sir-doon, gabar kasta oo xog heysa, ama xiriir wada shaqeyn la leh Fahad Yaasiin ama saraakiisha kale NISA, waxaa soo wajahday cabsi xooggan, tan iyo afduubkii Ikraan Tahliil oo xalay la xaqiijiyay geerideeda.
MUQDISHO, Soomaaliya – Dufcaddii ugu horreysay oo haween booliska gaarka ah ee Haramcad ka tirsan ayaa galabnimadii Arbacada laga soo dajiyay Garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada muqdisho, kadib markii ay dhowr bilood tababar sare ku soo qaateen dalka Turkiga.
Saraakiil sare oo ka tirsan booliska oo uu horkacayo Taliyaha Ciidanka Booliska (Xijaar) oo ka mid ah kooxda qafaalka iyo khaarijinta, ku caanka ah ee Farmaajo iyo Fahad hoggaamiyaan, ayaa soo dhaweeyay, waxaana gabdhahaan oo reer Muqdisho ah shalay u billowday maalmihii halista, waxayna u baahan yihiin foojignan dheeraad ah iyo iska warqab gooni ah, maadaama ay u dhexeeyaan (Labaab Shabaab oo wada shaqeysa).
Kooxda dhagarta u saaxiibka ah ee F&F hayaamiyaan, waxa hore loogu bartay in dhacdo kasta oo weyn ay ku damiyaan dhacdo kale oo ka weyn, waxaana cabsi weyn laga qabaa in qeyb ka mid ah gabdhaha ka tirsan ha’adaha dowladda, loo gacan galiyo Al-Shabaab, si caddeyn looga dhigo in Kooxda xiriirka la leh Al-Qaacida, ay afduuban karaan shaqaalaha Dowladda.
Gabdhaha tababarka ciidan ku soo qaatay Turkiga, ee dalka dib ugu soo laabtay, waxa ay noqon karaan bartilmaameedka koobaad ee Fahad, kaas oo aaminsan in aysan jirin cid kula xisaabtameysa jariimooyinka iyo gabbood-fallada uu galay intii uu xilka hayay.
Jidkii uu Fahad masriiyay, Ikraan Tahlliil iyo Almaas Elman, oo ahaa gabdho aqoon-yahanno ah, ayaa laga diyagaa in ay maraan gabdhaha kale ee ka tirsan shaqaalada Dowladda, kuwaas oo hadda wajahaha caqabad kiis ka fakasho ah oo Taliska NISA doonaayaan in ay ku daboollaan kiiska Ikraan Tahliil.